Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation ee Kanada - PhD 2022
Sida loogu guuleysto deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation Kanada - PhD
Tani waa hage ku saabsan sida ardaydu u codsan karaan uguna guuleysan karaan deeqda waxbarasho ee 'Trudeau foundation' oo ay bixiyaan hay'adaha Kanada. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Ph.D. deeqaha waxbarasho ee Kanada waxaana lagu bixiyaa iskuulo badan oo ku yaal Kanada.
Kanada waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee wax lagu barto, iyada oo bixisa waxbarasho heer caalami ah oo heer kasta oo daraasad ah iyo edbinta ah aqoonyahannada heer qaran iyo caalamiba.
Si loo dhiirrigeliyo ardayda oo waliba loogu fududeeyo inay ka qaybgalaan waxbarashada heer caalami ah ee hay'adaha Kanada bixiyaan, waxaa jira noocyo kala duwan oo ah barnaamijyo deeqo waxbarasho oo ay ardaydu dalban karaan si ay uga caawiyaan maal-gelintooda.
Qaar ka mid ah deeqdan waxbarasho ayaa laga yaabaa inay qayb ahaan maal-galaan ama si buuxda loo maalgeliyo laakiin si kastaba ha noqotee, dhammaantood waxay bixiyaan gargaar lacageed culeyska waxbarashada ardayda.
Inta badan deeqaha waxbarasho waxaa bixiya dowladda Kanada, ururada samafalka, aasaaska, shakhsiyaadka hodanka ah (inta badan ardayda dugsiga) iyo guddiga iskuulka.
Hay'adda 'Trudeau Foundation' waa mid ka mid ah aasaaska hay'adaha samafalka ee deeqaha siiya aqoonyahannada Kanadiyaanka ah, ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba waxay ku amraan abaalmarintan oo ay martigeliyaan hay'adaha Kanada.
Maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa shuruudaha u-qalmitaanka iyo habka dalabka si aad u dalbato oo aad ugu guuleysato deeqda waxbarasho ee aasaasiga ah ee 'Trudeau' arday ahaan gudaha ama caalami ah.
1 Deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation ee Kanada
1.1 Waa maxay deeqda waxbarasho ee aasaasiga ah ee Trudeau?
1.2 Dukumiintiyada Codsiga ee Deeqda Aasaasiga ah ee Trudeau
1.3 Sida loo Codsado deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation'
1.3.1 Shuruudaha U-qalmitaanka ee Deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation'
1.3.1.1 Muxuu Trudeau Foundation deeqda waxbarasho ee dhakhaatiirtu ka raadsadaa codsadayaasha?
1.3.2 Nidaamka Xulista ee Deeqaha Aasaasiga ah ee Trudeau
1.3.3 Nidaamka Codsiga ee deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation'
1.5 Talo soo jeedin
Deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation ee Kanada
Waa maxay deeqda waxbarasho ee aasaasiga ah ee Trudeau?
Waxaa si buuxda loogu yaqaanaa Pierre Elliot Trudeau Foundation (PETF) iyo hadaf in lagu xoojiyo cilmi baarayaasha inay saameyn macno leh ku yeeshaan adduunka. Aasaasku waa hay'ad samafal madaxbanaan oo aan xisbi ku dhisnayn oo la aasaasay 2001 laguna xasuusto ra'iisul wasaarihii hore ee Kanada.
Deeqda aasaasiga ah ee Trudeau waa barnaamij seddex sano ah oo loo aasaasay in lagu tababaro hoggaamiyeyaasha ku hawlan lana qalabeeyo musharrixiinta takhasuska leh qalab sax ah iyo aqoon ay ku wadaagaan oo ay ku dabaqaan daraasaddooda una noqdaan hoggaamiyeyaal hal abuur leh oo ka socda hay'addooda iyo bulshadooda.
Deeqdani waa illaa $ 40,000 sanadkiiba muddo seddex sano ah waxayna daboolaysaa waxbarashada iyo qiimaha nolosha iyo $ 20,000 oo kale sanadkiiba muddo seddex sano ah oo ah cilmi baaris iyo gunno safar.
Barnaamijka deeqda waxbarasho ee saddexda sano ah wuxuu u socon doonaa sidan soo socota;
Hoggaan ku hawlan: Sannadka ugu horreeya ee muddada, aqoonyahannadu waa inay kaqeyb galaan machadyada hoggaanka ku hawlan meelaha ka kala tirsan Kanada iyo adduunka halkaas oo aqoonyahannada loogu bandhigi doono fikradaha iyo khibradaha ka baxsan derbiga jaamacadda. Barnaamijka hoggaaminta ee ku hawlan wuxuu awood siinayaa aqoonyahannada si ay u horumariyaan karti bulsheed, shucuur iyo dabeecad oo cusub.
Shirka Saameynta: Sannadka labaad ee barnaamijka, aqoonyahannada ayaa isu imaan doona si ay u abaabulaan shirweyne dadweyne halkaas oo ay ku helayaan inay aqoonta kula wadaagaan guud ahaan bulshada ayna kobciyaan wadahadalka bulshada iyagoo siinaya aqoonyahannada fursad ay ku xoojiyaan awooddooda hoggaamineed iyagoo la shaqeynaya kuwa kale.
Mashruuca Hal-abuurka: Tani waa sanadkii seddexaad ee ugu dambeeya barnaamijka, aqoonyahanadu waxay si wada jir ah uga shaqeyn doonaan sidii loo horumarin lahaa mashruuc hal abuur leh oo laga yaabo inuu yahay qaab buug, soo saar tiyaatar ama lacag ururin. Marka sidaas la samaynayo, aqoonyahannadu waxay tijaabiyaan ku-dhaqanka aan caadiga ahayn ee faafinta aqoonta iyo ka-qaybgalka dadweynaha.
Deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation' waxaa loogu talagalay oo keliya ardayda takhasuska leh, heer qaran iyo heer caalami, waxayna diiradda saaraysaa horumarinta ardayda hoggaamiyeyaasha. Deeqda waxbarasho waxay ku fidsan tahay hay'ado kala duwan oo Canadian ah oo iyagu martigaliya isla markaana ardaydu waxay ku dalbadaan oo keliya hay'adda martida loo yahay.
Deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation' waxaa la siiyaa koox aqoonyahanno kala duwan ah oo la soo xulay, oo ay ku jiraan kala duwanaanshaha xagga jinsiga, aragtiyada, luqadda, isirka / jinsiyadda, gobolka Kanada ee daraasadaha iyo naafonimada.
Dukumiintiyada Codsiga ee Deeqda Aasaasiga ah ee Trudeau
Fiiso arday oo sax ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah
Qoraalka qoraalka ah
Hab aqoonsi oo ansax ah
Laba warqadood oo talo ah
Sida loo Codsado deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation'
Halkan waxaa ku yaal hage ku saabsan sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation' laakiin ugu horreyntii waxaa jira shuruudo u qalmid gaar ah codsadayaashu waa inay gudbaan.
Shuruudaha U-qalmitaanka ee Deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation'
Codsadaha waa in horay loo siiyaa gelitaanka barnaamij dhakhtar oo waqti buuxa ah oo ku saabsan cilmiga aadanaha ama sayniska bulshada oo loo geeyo hay'ad Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Codsadeyaasha horeyba sanadka koowaad, laba, ama seddex ka mid ah barnaamijka dhaqtarka buuxa ee waqtiga buuxa ee cilmiga aadanaha ama cilmiga bulshada ee jaamacad Canadian ah oo la aqoonsan yahay ayaa sidoo kale xaq u leh inay codsadaan.
Aasaaska 'afar mowduuc oo muhiim ah ayaa ah Xuquuqda Aadanaha iyo Sharafta, Jinsiyadda Mas'uuliyadda, Kanada iyo Adduunka, Dadka iyo Deegaankooda. Si aad u noqotid musharax uqalma, shaqada dhakhtarka codsaduhu waa inuu la xiriiro ugu yaraan mid ka mid ah mawduuca aasaaska.
Muwaadiniinta Kanadiyaanka ah ee ku jira hay'ad Canadian ama hay'ad caalami ah ayaa xaq u leh inay codsadaan.
Ardayda ajnebiga ah, kuwa aan Kanadiyaanka ahayn iyo deganayaasha joogtada ah ee ka diiwaangashan hay'ad Canadian ah oo leh ogolaansho waxbarasho oo ansax ah ayaa waliba xaq u leh inay codsadaan.
Muxuu Trudeau Foundation deeqda waxbarasho ee dhakhaatiirtu ka raadsadaa codsadayaasha?
Heer sare xagga aqoonta
Khibrad hoggaamineed iyo xirfado
Asal ahaan iyo dhiirranaan
Ku xirnaanta mawduucyada cilmi-baarista takhasuska ee afar mowduuc oo aasaasi ah
Ka qayb qaadashada bulshadaada
Markaad ka gudubto shuruudaha u-qalmitaanka ee kor lagu soo sheegay, ka dib markaa waad sii socon kartaa nidaamka dalabka ee lagu soo sheegay hoos.
Sug! Kahor intaadan wax ka baranin nidaamka arjiga, nidaamka xulashada sidoo kale waa muhiim in la ogaado maadaama ay kaa caawin doonto inaad ogaato sida guuleystayaasha loo xushay waxayna ku siinayaan talooyin ku saabsan sida adiguba ugu guuleysan karto deeqda waxbarasho ee aasaaska 'Trudeau foundation'.
Nidaamka Xulista ee Deeqaha Aasaasiga ah ee Trudeau
Codsiyada waxaa kaliya lagu sameeyaa iyada oo loo marayo nidaamka xulashada gudaha ee jaamacadda martigelinta iyada oo loo marayo bogga dalabka aasaasiga ah.
Jaamacadaha martida loo yahay ayaa laga yaabaa inay go'aansadaan inay magacaabaan musharixiinta iskuulkooda sidoo kale haddii adiga laguu magacaabay dugsigaaga, codsigaaga waxaa loo gudbin doonaa PETF si loogu maro hanaan dib u eegis adag.
Gabagabeeyayaasha tartanka waxaa lagu martiqaadayaa inay wareystaan ​​guddiga xulashada taariikh cayiman oo boostada lagugu soo diri doono.
20 ama in ka badan aqoonyahanno ayaa badanaa loo doortaa inay noqdaan guuleystayaal sanadkiiba.
Nidaamka Codsiga ee deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation'
Tani waa talaabo talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo dalbado deeqda waxbarasho
Baro wax ku saabsan waqtiyada kama dambaysta ah ee xulashada gudaha hay'addaada martida loo yahay: Sidii aan horayba u soo sheegay, deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation' waxay ku faaftaa hay'ado kala duwan oo reer Kanada ah sidaa darteed dhammaantood waxay leeyihiin waqtiyo kala duwan, markaa wax ka baro waqtiga ugu dambeeya ee jaamacaddaada oo bilow dalab hore.
Diiwaangelinta: Marka tartanku bilaabmo, iska diiwaangeli koontada bogga dalabka aasaasiga ah. Ka dib 4 maalmood oo shaqo oo diiwaangelinta koontada ah, waxaad heli doontaa emayl wata magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah. Haddii aadan arkin markaa, waad hubin kartaa galkaaga spam iyo sidoo kale waxaad la xiriiri kartaa aasaaska haddii aan wali la helin.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad koonto horey uga jirtay tartan hore oo deeq waxbarasho ah, weli waad ku geli kartaa adigoo adeegsanaya aqoonsiyadaada jira ama aad codsan karto dib u habeyn sir ah.
Buuxi arjiga: Markaad gasho, waad dalban kartaa adoo buuxinaya foomka dalabka qaybta "Qabyo qoraalka" ee bogga isla markaana buuxi macluumaadkaaga saxda ah ee xiriirka ee qaybta "Xiriirada" ee bogga.
Hel waraaqaha talo bixinta: Waxaa lagaa codsan doonaa inaad geliso magaca iyo cinwaanka iimaylka labada garsoore sanduuqa lagu siiyay adoo buuxinaya foomka dalabka. Kadib email ayaa loo diri doonaa labada garsoore iyadoo laga codsan doono inay u soo diraan warqadooda tixraaca qaabka PDF si toos ah bogga aasaasiga ah. Tixraacyadaada ogeysii taas oo hubi inay ku soo gudbiyaan waqtiga.
Soo rar qoraallada: Waxaad soo galin doontaa hal qoraal dukumiinti PDF ah oo daboolaya dhammaan waxbarashadaada dugsiga sare kadib.
FIIRO GAAR AH: Musharrixiinta ka qaybgalay CEGEP ee Quebec waa inaysan ku darin qoraalladooda 'CEGEP'.
La xiriir jaamacaddaada: Codsadeyaashu waa inay u sheegaan sarkaalka abaalmarinta ee masuulka ka ah tartanka deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation' jaamacaddooda kala duwan iyagoo ogeysiinaya inay codsadeen taas oo hubinaysa in dalabkaaga lagu dari doono nidaamka xulashada jaamacaddaada.
Magacaabista jaamacadaha: Jaamacadaha sidoo kale waxay magacaabi karaan ilaa afar musharax oo ah deeqda waxbarasho ee 'Trudeau Foundation' halka jaamacadaha shisheeye ay magacaabi karaan kaliya seddex musharax. Magacyada musharax kasta waa in loo gudbiyaa aasaaska kaas oo markaa u diri doona aqoonsi codsadayaasha ay soo magacawday jaamacad.
Nidaamka xulashada deeqaha aasaaska Trudeau: Dhammaan musharrixiinta ay soo magacaawday jaamacaddu waxay mari doonaan hanaan xul ah oo adag, finalka ka dib waxaa lagu casuumi doonaa wareysi. Taariikhda wareysigan badanaa dadweynaha looma ogeysiiyo.
Halkaas waxaad ku leedahay nidaamka dalabka ee tartanka deeqda waxbarasho ee Trudeau Foundation iyo macluumaad kale oo lagama maarmaan ah si ay kaaga caawiyaan inaad ku guuleysato deeqda waxbarasho.
The Pierre Elliot Trudeau deeq waxbarasho ayaa kaa caawin doonta inaad hesho aqoonta aad u qalanto inaad noqoto hogaamiye wanaagsan, barnaamijkeeda saddexda sano ah waa mid geesinimo leh, oo gebo gebo leh si looga dhigo cilmi-baareyaasha dhakhaatiirta inay noqdaan hoggaamiyeyaal ku hawlan oo si wax ku ool ah ugu soo kordhin doona bulshada iyo beelaha.
Iyagoo kaashanaya kuwa kale ee leh aragtiyo kaladuwan kana soo jeeda asallo kaladuwan, aqoonyahanadu waxay bartaan hogaaminta iyagoo kabaxaya aaggooda raaxada waxayna ku xoojinayaan inay noqdaan aqoonyahano wanaagsan oo leh xirfadaha hogaaminta saxda ah.
Ku Bilow Arjiga Halkan
38 Koorsooyin Jaamacadeed oo Furan
Xeerarka Fiisaha Ardayda Kanada iyo Shuruudaha
Deeqaha Canadianka Deeqaha PhD Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Deeqda aasaasiga ah ee Trudeau
Previous Post:Shuruudaha Laval Universitè | Khidmadaha, Deeqaha waxbarasho, Barnaamijyada, Qiimeynta
Post Next:13 Deeqaha Sare ee Imaaraadka ee loogu talagalay dadka ajaanibta ah (Ardayda Caalamiga ah)
Pingback: Top 10 Barnaamijyada PhD oo si buuxda loo maalgeliyey oo leh Xiriirada Codsiga 2021